Vaovao momba ny seranana miafina Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Efa 4 andro izay no nanombohan'ny Apple nandidy mialoha ny Apple Watch tany amin'ireo firenena sivy voalohany. Mangatsiaka ireo tarehimarika tahiry ary namidy singa iray tapitrisa mahery izy ireo tamin'ny faran'ny herinandro voalohany. Raha mitohy ity taham-pandraharahana ity ary raha raisina an-tsaina fa halefa tsikelikely any amin'ny firenena vaovao dia afaka miresaka momba ny afaka hametraka singa 10 tapitrisa mahery eny an-tsena amin'ny 2015.
Araka ny efa fantatrao, ao amin'ny Apple Stores amin'ireo firenena sivy ireo, ny sampana tsirairay amin'ny fiambenana amin'ny maodely sy habe samihafa dia efa azon'ny mpampiasa ampiasaina mba hosedraina. Na izany aza, efa elaela isika dia manana ny lalitra ao ambadiky ny sofina amin'ny resaka heverina seranan-tsambo ara-batana izay ananan'ny Apple Watch amin'ny iray amin'ireo sisiny ifandraisan'ny fehy.
Milaza izahay fa tezitra izahay satria io seranana io dia hita fa tsy sarona tamin'ny maodelin'ny Apple Store, saingy misy modely hafa koa, na dia eo aza ny toerana misy ny seranana, toa rakotra izy io. Ny seranana resahintsika dia hita voalohany tamin'ny volana martsa taorian'izay izay nanomboka niresaka izy ireo raha mety hitarika amin'ny fampiasana ny tadiny izay mampitombo ny isan'ny hetsika ho tanterahina mitovy, ary na dia hampitomboana ny fizakan-tenany.
Na izany aza, Apple dia tsy namoaka antoka momba ity seranana miafina ity izay manana tsipika misy fifandraisana enina tena mitovy amin'ny mpampitohy ampiasaina hamerenana ny MacBook miaraka amin'ny MagSafe 2. Mety ho eo anoloan'ny seranana miafina isika fa amin'ny ho avy dia hampiasaina amin'ny sisa tavela amin'ny olona na eo alohan'ny vavahady mankany amin'ilay fitaovana, nataon'i Apple, hahafahana mamantatra azy raha sendra misy fandidiana tsy mahomby.
Ny hany zavatra azontsika atao amin'izao fotoana izao dia ny miandry ny 24 aprily hahalala raha manana ny seranan-tsambo azon'ireo sampana tonga amin'ny mpividy azy ireo na voasarona tsotra izao ary tsy misy fampiasan'ny mpampiasa farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Hitanay indray ilay seranana miafina, tsy notononin'i Apple, tao amin'ny Apple Watch
Ao amin'ny OS X Yosemite 10.10.3, nohatsaraina ny fanohanana ny fampisehoana 4K sy 5K